Oke dị elu nke ala Jack 3T ahịa - Zhejiang Yipeng Wity T., LTD | EPONT
Bydraulic hydraulic na-agbanyụ ahịa Jack 50t
Na-elebara anya na imewe nke dị mma maka mgbasa ozi EPONET.
1. Ogologo oge enwere m ike ịnweta nzaghachi mgbe anyị zigara ajụjụ a?
Anyị ga-aza gị n'ime awa iri na abụọ n'oge ọrụ.
2. Inye anyị ngwongwo ahụ?
Ọtụtụ mgbe, anyị ga-ebuga ngwongwo gị n'oké osimiri, n'ihi na anyị nọ na Jiaxing City, NingBO anyị bụ naanị kilomita 150 na-aga, ọ dị mma ma rụọ ọrụ nke ọma n'ịgbọ mmiri na mba ndị ọzọ.
2.A gị onye na-emepụta ya ma ọ bụ ụlọ ọrụ azụmaahịa?
Anyị nwere ihe abụọ nkedo nkedo nke anyị abụọ na otu ụlọ ọrụ CNC Ngwá ọrụ, anyị nwekwara ngalaba ahịa mba ofesi anyị. Anyị na-ewepụta ma na-ere onwe anyị niile.
A na-ebuga ngwaahịa karịrị iri atọ dịka USA, Germany, Spain, ndị ahịa OM, ndị ahịa OM, ndị ahịa OMA, ndị ahịa Canada na ụgbọ oloko na ụgbọ oloko na ebe a na-ewu ụlọ , anyị enweelarị ihe karịrị iri ụlọ ọrụ 500 nke ụwa dị ka otu n'ime ndị na-enye ha ukwu na China.
2. Ha nwere ahịrị ndị na - emepụta ihe na 2 Okpokoro ọkụ na - emepụta, karama ahụ bụ otu ụbọchị, anyị nwere ike ịpụta ihe dịka 5000PC, banyere ala jack anyị nwere ike iwepụta 500pcs.
3. Companylọ ọrụ ahụ na-ekpuchi mpaghara 17000 square, ụlọ ọrụ na-ewere "nke ọma" nke ọma "na-enye ndị ahịa aha ọma na ụlọ ọrụ, ọnụ ọgụgụ na-etolite na-etolite. Yipeng kwenyere na sonyere gị, a ga-adị mma echi, kwere Yipeng, họrọ Yipeng, sonyere Yipeng, anyị ga-enye gị ọrụ na nkwa.
4. Manye ụlọ ọrụ na cnc lathe, igwe na-egweri ihe, ule nyocha, na-eme ihe ike, iji mee ka nhazi ụlọ ọrụ a pụrụ ịdabere na ya Olo nke akụkụ ahụ maka ụlọ ọrụ - Jack Cylinder, nke nnweta nke igwe na-eme mkpọtụ iji hụ na idobe ọnọdụ, nke mere na oke ngwaahịa abụrụla nnukwu ego.
Zhejiang Yipeng igwe c., LTD.WAS guzobere na 2006. Kedu nke dị n'etiti Yangtze Osimiri Delta n'ókè nke Belt Belt, juaxing, ebe ọ nọ nso, Ningb, Suzhou City, Wdg, nke ahụ dabara adaba maka njem. Companylọ ọrụ ahụ bụ nchịkọta nke engine dị iche iche, ala Jack 3t, Jack Inffry nke bụ ahụ ụlọ ọrụ pụrụ iche maka nyocha, mmepe na ahịa. Companylọ ọrụ ahụ na-ekpuchi mpaghara 17000 square, ụlọ ọrụ na-ewere "nke ọma" nkà azụmahịa "na-enye ndị ahịa aha ọma na ụlọ ọrụ, ọnụ ahịa na-etolite na-etolite. Yipeng kwenyere na sonyere gị, a ga-adị mma echi, kwere Yipeng, họrọ Yipeng, sonyere Yipeng, anyị ga-enye gị ọrụ na nkwa. Everont sistem bụ nchịkọta nke engine dị iche iche, ala Jack 3t, Jack Inffry nke bụ ahụ ndị ọrụ pụrụ iche maka nyocha, mmepe na ahịa.1. Anyị nwere asambodo: Anyị nwere asambodo dị na ya. Teknụzụ na-arụpụta: nyocha na-aga n'ihu na ihe ọhụụ. Afọ ojuju ndị ahịa: nye ngwaahịa na-eju afọ.